संक्रमितसँगै आएका ३३ मै ‘कोरोना नेगेटिभ’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
संक्रमितसँगै आएका ३३ मै ‘कोरोना नेगेटिभ’
चैत्र १३, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
जनकपुर — फ्रान्सबाट फर्केकी १९ वर्षीया युवतीसँगै विमानमा आएका प्रदेश २ का ३३ जनामा कोभिड–१९ को संक्रमण नदेखिएको दाबी गरिएको छ ।
ती युवतीमा कोभिड–१९ देखिएपछि कतार एयरवेजमा सँगै आएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। ‘एक जनाको काठमाडौंको टेकुमा परीक्षण भइरहेको छ, अरूमा संक्रमण देखिएन,’ प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीले भने, ‘३३ जनालाई नै अहिले होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।’
फ्रान्सबाट दोहा हुँदै चैत ४ मा काठमाडौं ओर्लिएकी ती युवतीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सँगै फर्किएका प्रदेश २ का ३३ जनाको खोजी गरिएको थियो। उनीहरू सबैको ज्वरो, रगत र खकार परीक्षण गरिएको छ। सिरहाका एक जनामा भने ज्वरो देखिएपछि टेकु पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘क्वारेन्टाइनमा किन राखिएन?’
प्रदेश २ सरकारले कतार एयरवेजबाट फर्किएकालाई क्वारेन्टाइनमा नराखी सिधै आउन दिएकामा आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा नराखिँदा संक्रमणको जोखिम बढेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए।
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले कतार एयरवेजबाट फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य जाँच नगरी सिधै प्रदेशमा पठाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई ‘मेन्सन’ गर्दै झाले बिहीबार ट्वीट गरेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमान ढिलो बन्द गरियो। फर्किएकालाई पनि क्वारेन्टाइनमा पठाइएन। यस्तो लापरबाहीको जिम्मेवारी कसले लिने?’
कतार एयरवेजबाट फर्किएकामध्ये २ जना बुधबार सेनाले निर्माण गरेको धनुषाको गंगुलीस्थित क्वारेन्टाइनमा पुगेका थिए। दुवै जनामा कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएपछि सिरहास्थित सरकारी क्वारेन्टाइनमा बस्न फर्काइएको सेनाको महेन्द्रनगरका गणका कर्णेल अञ्जन रूपाखेतीले बताए।
‘कुनै लक्षण नदेखिएकाले फर्काइएको हो,’ कर्णेल रूपाखेतीले भने, ‘जिल्ला–जिल्लामा पनि क्वारेन्टाइन रहेकाले जनकपुरै आइरहनुपरेन।’ प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ १९:३८
प्रदेश १ मा ८ सय आइसोलेसन शय्या थपिँदै
विराटनगर — प्रदेश १ मा ८ सय शय्याको आइसोलेसन वार्ड बनाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्‍न जिल्ला अस्पतालमा सम्भावित संक्रमितलाई राख्‍नका लागि आइसोलेसन बनाउन लागेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार विभिन्‍न ६ वटा ठूला अस्पताललाई आइसोलेसन वार्ड बनाउन निर्देशन दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशमा हालसम्म २ सय ३२ वटा आइसोलेसन शय्या छन् । यो पर्याप्त नहुने भएकाले थप शय्या व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।
विराटनगरका नोबेल अस्पतालमा दुई सय, धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुई सय, विराटनगरकै कोसी अस्पतालमा सय, विराट मेडिकल कलेजमा सय, विर्तामोडको बीएन्डसी अस्पतालमा डेढ सय, भद्रपुरस्थित मेची अस्पतालमा ५० शैय्याको आइसोलेसन शैय्या तयार गरिने भएको हो ।
विराटनगरमा प्रदेश सरकारले संक्रमितको उपचार र रेखदेखका लागि ५० शय्या रहने बेग्लै अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । नेशनल ट्रेडिङको भवनमा बन्दै गरेको यो अस्पतालमा कम्तीमा १० शय्या भेन्टिलेटरसहितको हुने जनाइएको छ ।
पहिल्यै रहेको भवनको सफाइ, खानेपानी व्यवस्था, रंगरोगन, बिजुली व्यवस्थापनलगायत काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त स्थानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरु जडान गर्ने काम समेत भइरहेको मन्त्री घिमिरेले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ १८:२८
बिरामी जाँच्‍न घरमै डाक्टर
गुणस्तर प्रमाणित नभई चीनबाट ल्याइएका कीट प्रयोगमा आउँदैनन् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
आफ्ना नागरिक घर ल्याउन केले छेक्यो ?
दुर्गा खनाल, देवेन्द्र भट्टराई
संक्रमित युवतीको स्वास्थ्यमा सुधार, दोस्रोपटक स्वाब परीक्षणमा पठाइयो
चिसो भुइँमा भारतीय श्रमिक
दिल्लीको निजामुद्दिन धार्मिक भेलामा सहभागी नेपालीको खोजी सुरु
स्पेन ९५९२३ ८४६४ १९२५९
चीन ८२२९४ ३३१० ७६२०६
जर्मनी ७१८०८ ७७५ १६१००
हाल ८६२२३४ ४२४०४ १७८८३६
भारतमा संकटग्रस्त नेपालीका निम्ति के गर्दै छौ, सरकार ?
अम्बिकाप्रसाद जोशी चैत्र १८, २०७६
कोरोना महामारीको त्रासले एकातिर राष्ट्र–राज्यहरू देशको स्वास्थ्य संकटसँग जुझ्नुपरेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ ।
दीनहीनहरूका लागि पनि होस् देश
सम्पादकीय चैत्र १८, २०७६
कहिलेकाहीं हामीले लिनैपर्ने निर्णय त लिन्छौं तर त्यसले निम्त्याउन सक्ने परिणाम र जटिलता व्यवस्थापन भने गर्न सक्दैनौं ।